ट्रम्पका थप दुई यौनकाण्ड सार्वजनिक !
२७ असोज, काठमाडौं । अमेरिकामा राष्ट्रपतिको चुनाव आउनै लाग्दा रिपब्लिकन उम्मेद्वार डोनाल्ड ट्रम्पका थप दुईवटा यौन हिंसाजन्य घटनाहरु सार्वजनिक भएका छन् । ट्रम्पले एउटा यौनहिंसा उडिरहेको विमानमै गरेको र अर्को ट्रम्प टावरको लिफ्ट छेउमा गरेको दुई अमेरिकी महिलाले उजागर गरेका छन् ।
यी घटनाहरु त्यतिबेला बाहिर आए, जतिबेला ट्रम्पले महिला बारेमा छाडा शब्दहरु बोलेकोबारे टेलिभिजनमार्फत सबै अमेरिकी जनताले सुन्नेगरी जवाफ दिइरहेका थिए ।
लिड्सका अनुसार ट्रम्पले उनका स्तन समाते । र, उनको स्कर्टमा हात हाल्ने कोसिस गरे । ‘उनी एक अक्टोपसजस्तै थिए, उनका हात मेरो शरीरका हरेक ठाउँमा थिए’
यसक्रममा दुईटी महिलाले आफूमाथि ट्रम्पबाट भएको यौन हिंसाजन्य कार्य अमेरिकी मिडियामार्फत सार्वजनिक गरेका छन् । एक महिलाले चलिरहेको विमानभित्र ट्रम्पले आफ्ना स्तन समातेको र स्कर्टभित्र हात घुसार्न खोजेको बताएकी छिन् ।
अर्की महिलाले चाँहि ट्रम्प टावरमा आफूले उनको सामना गर्नुपरेको खुलासा गरेकी छिन् ।
डोनाल्ड टम्पले दाबी गरेका थिए कि उनका त्यस्ता कोरा शब्दहरु ‘एक्शन’ मा कहिल्यै बदलिएका थिएनन् ।
विमानभित्रै यौन हिंसा !
आइतबार साँझ टीभीमा दोस्रो प्रेसिडेन्टियल डिबेटचलिरहँदा ७४ वर्षकी जेसिका लिड्स आफ्नै अपार्टमेन्टमा थिइन् । टीभीमा ट्रम्पको चेहेरा देखिपछि उनलाई स्क्रिन नै फुटाइदिऔं जस्तो लाग्यो । यद्यपि उनले टीभी फुटाइनन् ।
सन् १९७८मा जेसिका लिड्स
लगभग ४५ मीनेटको उडान भर्ने क्रममा उनी अहिले सम्झन्छिन्-ट्रम्पले कुम उचालेर उनलाई छुन सुरु गरे ।
लिड्सका अनुसार ट्रम्पले उनका स्तन समाते । र, उनको स्कर्टमा हात हाल्ने कोसिस गरे । ‘उनी एक अक्टोपसजस्तै थिए, लिड्सले अमेरिकी पत्रिका न्युयोर्क टाइम्ससँग भनिन्- उनका हात मेरो शरीरका हरेक ठाउँमा थिए । उनले ठानिन् कि विमानको पछिल्तिर जाऔं । ‘त्यो एउटा हमला थियो’ उनले भनिन् ।
लिड्स त्यसबेला ३८ वर्षकी थिइन् । उनी विमानको अर्कै सीटमा बसेकी थिइन् । तर, विमान परिचरले उनलाई फस्ट क्लासको खाली सीटमा बस्न भनेपछि उनी क्याबिनमा गइन्, जहाँ ट्रम्प थिए ।
आफूलाई ट्रम्पले अक्टोपसलेजस्तै समाउन थालेपछि उनी फुत्केर क्याबिनको सीटबाट पछाडिको सीटमा फर्किइन् ।
ट्रम्पटावरमा अर्को यौनजन्य हिंसा
आइतबार राति टीभीमा ट्रम्पले आफ्नो अभद्र बोली एक्शनमा परिणात नभएको बताइरहँदा ओहियोकी अर्की एक महिलालाई पनि यसले क्रुद्ध बनायो । उनी हुन्-राहेल क्रुक्स ।
न्यूयोर्क स्थित ट्रम्पटावर
उनको कम्पनीले ट्रम्पसँग व्यापार गरेको गरेको थियो । लिफ्ट बाहिर भेट हुँदा उनले आफैं परिचय गरिन् । उनीहरुले हात मिलाए । तर, ट्रम्प त्यहाँबाट गएनन्, उनले अहिले पुरानो कुरा सम्झँदै भनिन्- ‘उसले सीधै मेरो मुखमा चुम्यो । यो कुनै दुर्घटना थियो भन्ने महसुस हुँदैन, यो हिंसा हो भन्ने महसुस हुन्छ ।’
यो अति नै अनुचित कार्य थियो । क्रुक्सले एक अन्तरवार्तामा भनिन्- ‘म यति हैरान भएँ कि उसले सोच्यो, म यति निरीह थिएँ, उसले मलाई जे पनि गर्न सक्छ ।’
क्रुक्स आफ्नो कुर्सीमा फर्केर आइन् र तत्कालै आफ्नी दिदी बि्रयान्ने वेबलाई बोलाइन् । ओहियो एउटा सानो सहर, जहाँ उनीहरु हुर्केका थिए, उनले जे भएको हो, सबै आफ्ना कुराहरु दिदीलाई सुनाइन् ।
दिदीले उनलाई यो १६ सय मानिसहरु बस्ने ठाउँमा गालामा कसैले किस गर्छ भने सामान्य हो भन्दै सोधेकी थिइन् कि तिमी पक्का छ्यौ, उसले गालामा किस गर्न खोजेको होइन ?’ उनको जवाफ थियो, ‘होइन, उसले मेरो मुखमा किस गरेको हो । र, यो सामान्य होइन ।’